Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: fampiarana an’izany hoe manara-penitra | NewsMada
Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: fampiarana an’izany hoe manara-penitra
Mason-tsokina ka ny kely anana no ahiratra. Na izany aza eo amin’ny fandaminana ny raharaham-pirenena toy ny rehefa manatanteraka an’ireo adidy na madinika na vaventy fanao andavanandro na any an-tokantrano na any am-piasana, ny ezaka mampiseho ny faniriana ny famokarana zava-tsara hafa noho ny fanaovana alasafay no antoka ahitana voka-tsoa. Tsy vitavita ho azy anefa izany raha toa tsy nianarana na nodinihina lalina ny fomba sy fitsipika mifehy ny fomba fanatanterahana an’ilay raharaha ilofosana ary nanazarana ny tena sy ireo mpiara-miasa.
Azo lazaina koa aza fa mba ahafahana manana fahakingana eo am-panaovana ny asa dia ilaina fantatra tsara ny tanjona tratrarina amin’ilay atao sy ny anton’ny fihetsika tsirairay eo am-panaovana azy.
Manahirana moa ny fandaminana ny fifamoivoizana eto amin’ny tanàna, ny fahamaroan’ny fiara efa tsy ho zakan’ny tsenan’ny làlana intsony na tsy mahagaga aza noho izany ny fikatson’ny fifamoivoizana dia efa mila hampiteny ny moana. Misy ihany ny ezaka efa natao izay na tsy mahavaha tanteraka ny olana aza dia tokony anamaivana ny fahasahiranana. Anisan’izany ny fanitarana ny sehatra eo amin’ny fihaonan’
ny arabe maro toy ilay sehatra lehibe boribory eo Antanimena izay ihaonan’ny fiara avy any Ankadifotsy mitsororika avy any amin’ny fiangona katôlika ireo avy any amin’ireo làlana maro mandrantsana an’io faritra Antanimena io sy ireo fiara avy any Ankorondrano.
Ny hevitra voalohany nisarika ny fandinihan’ireo namorona an’io fomba vaovao fandrindrana ny fifamoivoizana io dia ny fisosan’ny fiara izay efa tafiditra ao anatin’ilay sehatra boribory mba tsy ao anatin’izy io no hisy fikatsoana izay ny antony nanomezana ny «priorité» ho an’izay avy any an-kavia. Izany hoe tokony hikoraina tsy misy sakantsakana hatrany ny fifamoivoizana ahafahan’izay efa tafiditra hisosa hampalalaka tsy misy fitsaharana ny fizorana ao anatiny noho izany. Ireo hitsofoka no tsy maintsy mandefitra.
Tsy izany anefa no miseho matetika. Misy fotoana dia ireo laharana efa tafiditra anatin’ilay sehatra boribory no tohanan’ny mpandamina ny fizoran’ny fiara. Mitohana ny ao afovoany, mibosesika ny avy aty ivelany, kentsona ny fifamoivoizana. Any andafin-dranomasina any anefa mitombo lalandava ny isan’ny sehatra boribory toy itony. Azo heverina, noho izany fitomboany an’isa izany dia tsapan’izy ireo any ny voka-tsoa entiny. Araky ny lova-tsofina dia teto Antananarivo no niseho voalohany ny fanomezana «priorité» avy any ankavia eo amin’ny fifamoivoizana mizotra amin’ny ankavanan-dàlana. Asa na ny fanefitefena ny fanao efa mitombona toy izany ny atao hoe tefy gasy ? Raha tsaroana anefa ny mikasika ny fambolem-bary, teto an-toerana no namoronana an’ilay fitsipika atao hoe SRI. Nampiharin’ny mpamboly any amin’ny firenena maro any Asia io SRI io ka nahatonga ny fireneny ho mpanondrana vary. Eto an-toerana, mbola sadasada ny fampiasana an’ireo fomba voalaza mampitombo vokatra ary ny firenena hatramin’izao mbola manafatra vary ahafahana mamahanana ny mponina.